Khaing Pwint Aung | Local Resources Centre | Page 2
Author Archives: Khaing Pwint Aung
ရန်ကုန်ပြုအခြေပြုကွန်ယက်၏ ၂နှစ်တာ မဟာဗျူဟာမြောက်နည်းလမ်းများကို (၂) ရက်တာ ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်
စက်တင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့နှင့် ၂၇ရက်တို့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းအနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ရန်ကုန်အခြေပြုကွန်ယက်၏ ၂နှစ်တာ မဟာဗျူဟာမြောက်နည်းလမ်းများကို Hotel H-valley တွင် ၂ရက်တာကျင်းပခဲ့သည်။
၂ရက်တာအစည်းအဝေးတွင် ကွန်ယက်မှ ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သွားမည့် ကိစ္စရပ်များ ၊ ကွန်ယက်၏ ပဲ့ကိုင်ကော်မတီဝင်များနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက်နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
သန်လျင်မြို့ရှိ သီဟဒီပ အားကစားရုံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဗဟိုအဆင့် ကမ္ဘာ့သားဆက်ခြားခြင်းဆိုင်ရာ အထိမ်းအမှတ်ပြပွဲတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့မှ ပါဝင်ခဲ့
ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့မှ သန်လျင်မြို့ရှိ သီဟဒီပ အားကစားရုံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဗဟိုအဆင့် ကမ္ဘာ့သားဆက်ခြားခြင်းဆိုင်ရာ အထိမ်းအမှတ်ပြပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ပြပွဲ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအား လူထုမှ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာသိရှိနိုင်ရေးအတွက် အသိပညာပေးရန်ဖြစ်သည်။
Health Awareness and Focused Group Discussion in Mudon Township, Mon State.
Health Awareness and Focused Group Discussion organized by Bright Future Organization at Mudon Township, Mon State.
မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ် လာရှိုးမြို့တွင်ပြုလုပ်
မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ် လာရှိုးမြို့ရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ရုံးတွင် အောက်တိုဘာလ (၁၀)ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ရာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများတတ်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
Health Awareness in Winkamoat Village, Mon State
Health Awareness Session of Lawee Mon Organization at Winkamoat Village of Kamarwet Township, Mawlamyine, Mon State.
Clean Dawei အဖွဲ့မှ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် အမှိုက်စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရေးလူထု လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်
Clean Dawei အဖွဲ့၏ အမှိုက်စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရေးလူထု လှုပ်ရှားမှုကို အောက်တိုဘာလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် Clean Dawei အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်ကျင်းပသောအမှိုက်စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ကြရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုအား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လှုပ်ရှားမှုတွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်မောင်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်အေး၊ ဒုဥက္ကဌ ဦးကြည်စိုး၊ ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့များ၊ စည်ပင်သာယာရေး၊ လမ်းဉီးစီး၊ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ကြက်ခြေနီနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ Miss Dawei Universal အလှမယ်များနှင့် Clean Dawei အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ကြသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့မှလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သည်။
လူထုလှုပ်ရှားမှုများအဖြစ် ပညာပေးဆိုင်းဘုတ်များ မြို့အနှံ့စိုက်ထူခြင်းနှင့် အသိပညာပေးစတေကာ ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
Change Agent Committee Meeting in Dawei.